မန်ယူသို့ ရော်နယ်ဒိုပြန်လာမည်ဟု DailyMail News သို့ပြောကြား…. – FBV SPORT NEWS
မန်ယူသို့ ရော်နယ်ဒိုပြန်လာမည်ဟု DailyMail News သို့ပြောကြား….
ရော်နယ်ဒိုဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း သူရဲ့ရွှေရောင်နေ့ရက်တွေကို မန်ယူကနေစခဲ့သူအဖြစ်လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ…မန်ယူဂုရုကြီး ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်ရဲ့မြေတောင်မြောက်ပေးမှုနဲ့အတူ ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားတယောက်အဖြစ် ရောက်ရှိလာသူဟာ လက်ရှိ စီးရီးအေ ထိပ်သီးကလပ် ဂျူဗင်တပ်အသင်းမှာ ကစားလျက်ရှိပါတယ်….
စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေအတွက် တူရင်မြေ မှာသွားကစားနေတဲ့ ရော်နယ်ဒို မှာ ခြေစွမ်းပိုင်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လည်း ရိုင်ယန်ဂစ်ကပြောပါတယ်…ရွန်းနီကတော့ NPM Sports ကို “ကျနော်က တော့ ရော်နယ်ဒိုဟာ မန်ယူမှာဘဲကစားသမားဘဝကို ကုန်ဆုံးသင့်တယ်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သူနဲ့အတူ မန်ယူမှာ ကစားသမားဘဝကို ကုန်ဆုံးလိုပါတယ် ” လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်….
ရော်နယ်ဒိုကတော့ ” တူရင်မြေမှာအဆင်မပြေတာတွေတော့ရှိတယ် ဒါပေမဲ့ ကျနော့်သားကတော့ ပျော်နေပါတယ် ဂျူဗီမှာ သူလည်းအဆင်ပြေနေတယ် ဒါပေမဲ့ အေးဂျင့်ကတော့ မန်ယူမှာ ပြောင်းကစားစေချင်ကြောင်းနဲ့ လက်ရှိမန်ယူအခြေနေကို ဖိအားတွေအောက်ကနေ ပြန်လည် ကယ်လိုကြောင်းကို Daily Mail News သို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်.. မန်ယူဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဆီကနေတော့ အပြောင်းအရွေ့သတင်းအနည်းငယ်မကြားရသေးပေမဲ့ ဆိုးရှားကတော့ ရော်နယ်ဒိုပြန်လာမယ်ဆို အတိုင်းထက်အလွန် ပါဘဲလို့ပြောသွားပါတယ်.
ITEC News MM
ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက် ဝန်ချတောင်းပန်တဲ့ ဂရင်းဝုဒ်